तर्कना शर्माको उपन्यास 'जेब्राक्रस' सार्वजनिक :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
तर्कना शर्माको उपन्यास 'जेब्राक्रस' सार्वजनिक
वैशाख २१ गते शनिबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा एक कार्यक्रमका बीच साहित्यकार तर्कना शर्माद्वारा लिखित उपन्यास 'जेब्राक्रस' सार्वजनिक गरिएको छ। साङ्ग्रीला बुक्सद्वारा प्रकाशित 'जेब्राक्रस' लेखक शर्माको पहिलो उपन्यास हो।
'जेब्राक्रस' ले हाम्रो समाज देखिइँदै आएका र लुप्त जटिल विषयहरू उजागर गरेको छ। समाजमा महिलाले भोग्नुपरेका तीता अनुभूति र समलिङ्गीहरूको सामाजिक र मनोवैज्ञानिक अवस्थालाई उपन्यासले खोतल्न खोजेको छ।
उपन्यास 'जेब्राक्रस' सार्वजनिक कार्यक्रममा कवि बाबु त्रिपाठीले अन्तरसंवाद कार्यक्रम संयोजन गरेका थिए। कार्यक्रममा डा. रजनी ढकाल, डा. तारालाल श्रेष्ठ तथा साहित्यकार भुवनहरि सिग्देलले उपन्यासमाथि आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।
'यो विषय नेपाली साहित्यको मात्र नभएर विश्वव्यापी बहसको विषय हो, जहाँ पितृसत्ताका कारण महिलामाथि हुने दमन, शोषण र अन्यायको खुलेर विरोध गरिएको छ,' डा. ढकालले भनिन्।
प्रकाशित मिति: आईतबार, वैशाख २२, २०७६, ०३:१४:००